Imbali emfutshane yeMicroscope
Indlela i-microscope ekhanya ngayo yaguquka ngayo.
Ngelo xesha lembali elibizwa ngokuba yi-Renaissance, emva kwexesha elimnyama "elimnyama", kuye kwabakho iimveliso zokushicilela , umrhubhe kunye nekhampasi ye-mariner, elandelwa kukufunyanwa kweMelika. Eyona nto iphawulekayo yenziwa yile microscope yokukhanya: isilathisi esenza iso luntu lisebenzise i-lens okanye idibanisi yeelensi, ukuba ligcine imifanekiso eninzi yezinto ezincinci. Yenza ukuba kubonakale iinkcukacha ezithandekayo zehlabathi kwihlabathi.
Ukungeniswa kweLilensi yamaLensi
Kudala, ngaphambi kwexesha elidlulileyo, umntu uthathe iqela le-Crystal eyinqaba phakathi naphakathi kweemida, ekhangele kuyo, kwaye yafumanisa ukuba yenza izinto zibukeke zikhulu. Omnye naye wafumanisa ukuba i-crystal enjalo yayiza kugxininisa imisebe yelanga kwaye ifake umlilo kwisiqwenga sesikhumba okanye ingubo. Abadlali bamaGrike kunye "neziglasi ezivuthayo" okanye "iziglasi ezivuthayo" zikhankanywe kwiincwadi zikaSeneca kunye noPliny Omdala, izafilosofi zamaRoma ngekhulu lokuqala AD, kodwa ngokucacileyo abazange basetyenziswe ixesha elide ukuveliswa kwemiboniso , ngasekupheleni kwe-13 ngenkulungwane. Bathiwa ngamalensi ngenxa yokuba bajonge njengembewu yelenti.
I-microscope yokuqala yokuqala yinto nje yiphubhu eneplati yento enye ekupheleni kwayo, kwaye kwenye, i-lens eyanikela ukukhulisa ngaphantsi kweeramitha ezilishumi - izihlandlo ezilishumi ubukhulu boqobo. Ezi zimangaliso eziqhelekileyo xa zisetyenziselwa ukujonga iintlanzi okanye izinto ezinwabuzelayo ezincinci kwaye ngoko zibizwa ngokuba yi "gilasi."
Ukuzalwa kwe-Microscope yokuKhanya
Phantse ngo-1590, abenzi baseBaldo ababini, u-Zaccharias Janssen kunye nendodana yakhe uHan, ngoxa bezama iilensi eziliqela kwi-tube, bafumanisa ukuba izinto ezikufutshane zabonakala zikhulu. Nguye owayengumcebisi we-microscope kunye ne- telescope . Ngomnyaka we-1609, uGalileo , uyise we-physics ye-modernics kunye neenkwenkwezi zeenkwenkwezi, weva oku kuhlola kwangaphambili, wenza imisebenzi yemilensi, kwaye wenza isixhobo esilungileyo kunye nesixhobo sokugxila.
UAnton van Leeuwenhoek (1632-1723)
Uyise we-microscopy, u- Anton van Leeuwenhoek waseHolland, waqalisa njengomfundi kwi-store yezinto ezomileyo apho kwakusetyenziswe iziglasi zokukhawulela ukubala iintambo kwiingubo. Wazifundisa ngokwakhe iindlela ezintsha zokugaya nokuphosa iilensi ezincinci zengqungquthela eziye zanikela ubungangamsha ukuya kwii-diameter ezingama-270, ezaziwayo ngelo xesha. Ezi zikhokelela ekwakhiweni kwe-microscopes kunye neziphumo zezinto eziphilayo ezaziwayo. Wayengowokuqala ukumbona nokuchaza ibhaktheriya, izityalo zemvubelo, ubomi obuncitshiweyo emanzini yamanzi, kunye nokusasazwa kwegazi kwi-capillaries. Ngethuba lobomi obude wayesebenzisa iilensi zakhe ukuba enze izifundo zeevulindlela kwizinto ezahlukeneyo ezingaqhelekanga, eziphilileyo nabangenabomi, kwaye wabika iziphumo zakhe kwiincwadi ezili-100 kwiRoyal Society yaseNgilani kunye neFrench Academy.
URobert Hooke , ubaba wesiNgesi we-microscopy, waphinda waqinisekisa u-Anton van Leeuwenhoek ukufumanisa okukhoyo kwezinto eziphilayo ezincinci zamanzi. UHooke wenza ikhophi ye-microscope ye-Leeuwenhoek kwaye yaphucula ngokuyila kwakhe.
UCharles A. Spencer
Kamva, ezimbalwa ukuphuculwa kwenziwa kwanekhulu le-19 leminyaka.
Emva koko amazwe amaninzi aseYurophu aqala ukuvelisa izixhobo ezibonakalayo ezifanelekileyo kodwa akukho nto ilula kunezixhobo ezimangalisayo ezakhiwa yiMerika, uCharles A. Spencer, kunye noshishino ayilungule. Izixhobo zosuku lwangoku, zitshintshile kodwa zincinci, zinika ubukhulu ukuya kwi-diameter ye-1250 kunye nokukhanya okuqhelekileyo ukuya kwi-5000 ngokukhanya okwesibhakabhaka.
Ngaphandle kweMicroscope yokuKhanya
I-microscope ekhanyayo, enye enye enezilisi ezigqibeleleyo kunye nokukhanya okugqibeleleyo, ayikwazi kusetshenziselwa ukwahlula izinto ezincinci kunesiqingatha sobude bokukhanya. Ukukhanya okuMhlophe kunomyinge ophakathi kwe-0.55 micrometer, isiqingatha salo ngu-0.275 micrometer. (I-micrometer enye iwaka-millimeter, kwaye i-micrometer ingama-25,000 ukuya kwi-intshi.) Amakhampasi amabini anesondeza kunye no-0.275 micrometer aya kubonakala njengomgca omnye, kwaye nayiphi na into ubukhulu bancinci kune-0.275 micrometer abuyi kubonakala okanye, ekugqibeleni, kuboniswe njenge-blur.
Ukubona iincinci ezincinci ngaphantsi kwe-microscope, izazinzulu kufuneka zigqithise ngokukhanya ngokupheleleyo kwaye zisebenzise uhlobo oluthile "lokukhanyisa," enye enomyinge omfutshane.
Qhubeka> I-Microscope ye-Electron
Ukuqaliswa kwe-microscope ye-electron kuma-1930 yazalisa i-bill. Equlunqwe ngamaJamani, uMax Knoll no-Ernst Ruska ngo-1931, u-Ernst Ruska wanikezelwa isigqibo seNobel Prize yeFiziki ngo-1986. (Esinye isiqingatha seNobel Prize sahlula phakathi kukaHeinrich Rohrer kunye noGerd Binnig kwi- STM .)
Kulo hlobo lwe-microscope, iifowuni zikhawuleza zitshintshile kude kube yilapho i-longue length yayo ifutshane kakhulu, kuphela ikhulu elinamanci elinesibini sokukhanya okumhlophe.
Iimitha zala mafoni ahamba ngokukhawuleza zijoliswe kwisampuli yeeseli kwaye zichithwa okanye zihlakazwe ngamalungu eseli ukuze zenzele umfanekiso kumgca weefotron.
Amandla kwi-Microscope ye-Electron
Ukuba iqhutywe kumda, i-electron microscopes inokwenza kube lula ukujonga izinto ezincinci njengebubanzi be-athomu. Uninzi lwe-electron microscopes ezisetyenziselwa ukufunda i-biological material "iyakubona" ​​ukuya kuma-10 angstroms - i-feat incredible, kuba nangona oku kungabonakali ii-athomu, ivumela abaphandi ukuba bahlule iinqununu zezinto eziphilayo ezibalulekileyo. Enyanisweni, iyakwazi ukukhulisa izinto ukuya kwii-1 million izihlandlo. Nangona kunjalo, zonke i-electron microscopes zixhomekeka kakhulu. Ekubeni akukho nhlobo ephilayo ehlala kuyo phantsi kwe-vacuum ephezulu, ayikwazi ukubonisa ukunyuka okutshintshayo okubonisa iseli ephilayo.
I-microscope yokukhanya i-Microscope ye-Electron
Esebenzisa isixhobo esilingana nesandla sakhe, u- Anton van Leeuwenhoek wakwazi ukufunda ukunyuka kwezinto eziphilayo.
Imbewu yamanje ye-van Leeuwenhoek yokukhanya kwe-microscope ingaba ngaphezu kwama-6 ubude ubude, kodwa iyaqhubeka iyimfuneko kwizinto eziphilayo ze-biologists kuba, ngokungafani ne-electron microscopes, i-microscopes ekhanyayo yenza umsebenzisi abone iiseli eziphilayo ngokusebenza. Umngeni oyintloko wamacroscopist ekukhanyeni kwixesha le-van Leeuwenhoek kuye kwaba kukuphucula ukuhlukisana phakathi kweeseli eziluhlaza kunye neendawo ezizungezile ukuze izakhiwo zeseli kunye nokunyakaza kubonakale lula.
Ukwenza oku baqulunqe izicwangciso ezinobungcali ezibandakanya iikhamera zevidiyo, ukukhanya okucatshulwayo, iikhomputha ze-digitizing, kunye nezinye iindlela ezivumela ukuphucula okukhulu ngokuchaseneyo, ukuvuselela ukuvuselela kwi-microscopy elula.
I-Cosmos: I-Spacetime Odyssey Recap - Isiqendu 101
Umthandazo weMoya wobugovu
Imfazwe Yehlabathi II: UMthetho Wokuqeshiswa Kwemali
Imifanekiso yesiFrentshi nge-Mauvais
Thixo bamaTshayina noThixokazikazi: iiHighters, Legends, ne-Gossips